कानून द्वारा सम्पत्ति सम्पत्ति को लागि सीमित भागीदारी
एक सीमित साझेदारी (एलपी) एक वा धेरै साझेदारहरू र एक वा बढी साझे साझेदारहरू समावेश छन्। यो साझेदारहरूबाट अलग-अलग कानूनी इकाई हो जुन यसमा रुचि राख्दछ। यो धेरै साझेदारको जस्तै छ, सीमित साझेदारहरूको सीमित सीमित दायित्वको स्थितिको लागि बचत गर्नुहोस्। ड्राइभिङ चिन्ता सामान्यतया साझेदारी साझेदारी सम्पत्तिको लागि दायित्व र सम्पत्ति संरक्षणको सुरक्षा हो। साथै एल.पी.ले धेरै साझेदारहरू बीचको रकम वितरण गर्ने क्षमता दिन्छ। एल.पी. उद्यमहरुको लागि कर फायदे प्रदान गर्दछ जस्तै अचल सम्पत्ति निवेश को रूप मा अन्य मानक निगम को तहत संभव नहीं हुनेछ।
सामान्य साझेदार कम्पनीको दैनिक सञ्चालनका लागि जिम्मेवार छन्। तिनीहरू पनि आफ्नो दायित्वहरू र ऋणका लागि उत्तरदायी छन्। दायित्व को अवशोषण गर्न को लागी, पेशेवरहरु लाई अक्सर सिद्धांतों को एक निगम या एक सीमित दायित्व कम्पनी को सामान्य पार्टनर को रूप मा उपयोग गर्दछ। यो स्थितिमा यस्तो इकाई राख्नु नियंत्रण कानुनी संस्थाहरूको संरक्षण गर्दछ। सीमित साझेदारहरूले कम्पनीमा लगानी लगानी गर्छन् र लाभमा साझेदारी गर्छन्, तर व्यापारको दैनिक अपरेसनमा कुनै भाग नदिनुहोस्। तिनीहरूको दायित्व, कम्पनीलाई स्वीकार्नुपर्छ, उनीहरूले लगानी गर्ने रकमको अनुपातमा सीमित छ।
कसरी सीमित साझेदारहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ
व्यवसायहरू जुन सीमित साझेदारीको रूपमा व्यवस्थित हुन्छन् प्रायः प्राय: जब एकल वा सीमित अवधि परियोजनामा ​​रहेको हुन्छ। व्यापार गतिविधिको उदाहरण जहाँ सीमित साझेदारीहरू प्राय: प्रयोग गरिन्छ, रियल एस्टेट विकासमा वा फिल्म उद्योगमा। रियल स्टेट परिदृश्यमा, सामान्य र सीमित साझेदारहरू एक अल्पकालिक परियोजना, एक निर्माण कार्यमा काम गर्न एकसाथ आउँछन्। सीमित साझेदारहरूले पैसा लगानी गर्छन् र सामान्य साझेदारहरूले उद्यम व्यवस्थापन गर्छन्। एक सीमित साझेदारी अक्सर लगानी लगानी सीमित दायित्व प्रदान गरेर पूंजी लगानी को प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गरिन्छ। एक उचित साझेदारी गरिएको सीमित साझेदारी सम्झौता एक प्रभावकारी संरचित सीमित साझेदारको आधार हो। यो सम्झौता प्राय: एक निजी हस्ताक्षरित दस्तावेज हो जुन सामान्य रूपमा सार्वजनिक रूपमा रेकर्ड गरिएको छैन।
उदाहरणका लागि, बी स्मिथले बढ्दो क्षेत्रमा बढ्दो भूमिमा आफ्नो आँखा राखेको छ। उसले कसरी लाभान्वित रूपमा सम्पत्तिमा दस घर निर्माण गर्ने योजना छ तर उसले काम पूरा गर्न पैसा छैन। उनको मित्र, जेफले पैसा कमाउन पैसा छ तर थाहा छैन कि कसरी देश विकास गर्ने। बिल र जेफले एक सीमित साझेदारी बनाउन सक्छ जसले जेफलाई आफ्नो दायित्व सीमित गर्नेछ। त्यसोभए, जेफले सीमित साझेदारीमा रुचिको विनिमयमा एलपीमा आफ्नो पूंजी योगदान पुर्याउँछ। बिल सामान्य पार्टनरको रूपमा कार्य गर्दछ र निर्माण प्रबन्ध गर्दछ। उचित रूपमा, दायित्व संरक्षण लिन एक कदम अगाडी, बिल सामान्य साझेदार हुन को लागी सीमित दायित्व कम्पनी गठन गर्न सक्छ। यो परिदृश्यले तिनीहरूको उद्यममा बिल र जेफको लागि अधिकतम दायित्व र सम्पत्ति संरक्षणको लागि अनुमति दिन्छ।
एक सीमित साझेदारी को लाभ
कर फाइदाहरू, सम्पत्तिहरूको सुरक्षा, र सीमित साझेदारहरूको लागि उत्तरदायित्वले सीमित साझेदारीको ढाँचा भित्र फेला पार्ने केही फाईदाहरू मात्र हुन्। जब एक सीमित पार्टनर स्वीकृत हुन्छ, सीमित साझेदार भित्रको सम्पत्तिले हिउँदबाट जोगाउँछ।
साथै, सीमित साझेदारको रूपमा व्यापार प्रस्तावको लागि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सजिलो छ। एक सीमित साझेदारीलाई एक अलग कानुनी संस्था मानिन्छ, र यस्तो मुकदमा हुन सक्छ, सुचारु हुन, र आफ्नै सम्पत्ति हो। सीमित साझेदारीको गठन पनि विश्वसनीयता, गुमनामता, मुक्ति संरक्षणको साथ सहयोग गर्दछ र तपाईंलाई कर्मचारीको लाभ कटौती गर्न अनुमति दिन्छ।
यी केही फाईलहरू हुन्:
व्यापारको सुरुवातमा कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दछ
साझेदारहरूको व्यक्तिगत कर रिटर्नहरू मा लाभहरू (कराधान मार्फत पास)
सम्पत्ति सम्पत्ति; जब एक सीमित पार्टनरले स्वीकारेको छ, एल.पी. भित्रको सम्पत्तिहरू हिजो देखि सुरक्षित हुन्छन्।
सीमित साझेदारहरू व्यापारिक मुकदमा दायित्वबाट सुरक्षित छन्
सीमित साझेदारी एक अलग कानुनी इकाई हो जुन सम्पत्ति, मुकदमा, र मुकदमा हुन सक्छ
सीमित साझेदारीको हानि
एक सीमित साझेदारीमा, सामान्य पार्टनरले व्यापार चलिरहेको बोझ भाडा दिन्छ र कम्पनीको दायित्व र ऋणको लागि सीधा उत्तरदायी छ। एक अलग कानूनी इकाई को रूप मा, सीमित भागीदारी को गठन को लागि आवश्यक निश्चित मात्रा मा कागजी कार्य छ। त्यहाँ पनि निगमको औपचारिकताहरू जस्तै वार्षिक सभाहरू छन्, जुन सीमित साझेदारीको आवश्यक छ। सीमित साझेदारीहरू पनि तिनीहरूको अवधिको योजना बनाउनुपर्दछ। सीमित साझेदारी सम्झौतामा नियमन नभएसम्म साझेदारी, मृत्यु, दिवालियापन वा सदस्यको प्रस्थानमा घट्छ। स्थितिमा निर्भर रह्यो, सीमित साझेदारीले सामान्य साझेदारहरू बीचको विवाद बढाउन सक्छ, र परिणामस्वरूप एक साझेदारले अन्य साझेदारको सहमति बिना कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौतामा प्रवेश गर्दछ। यसकारण, यो महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण छ कि ठीकसँग साझेदारीको सम्झौता सम्झौतालाई ठीक छ।
यी केही उल्लेख उल्लेखित छन्:
सामान्य साझेदारी भन्दा बढी कानुनी कागजातहरू आवश्यक छ
सामान्य साझेदार कम्पनीको ऋण र दायित्वहरूको लागि सीधा उत्तरदायी छ
व्यापारिक साझेदारीको औपचारिकताहरू राम्रो स्थितिमा राख्न र सीमित दायित्वको सही ढंगले सुरक्षित राख्न को लागी हेर्न सकिन्छ
साझेदारहरूको बीच विभाजित प्राधिकरण
अन्तमा, एक सीमित साझेदारी योजनाको लागि एक बहुमूल्य व्यापारिक संगठन हुन सक्छ र ठीकसँग दस्तावेज हुन सक्छ।